Juan Mata: De Matteo waa halyeey waana Tababare ku haboon inuu hugaamiyo Chelsea. - Caasimada Online
Home Warar Juan Mata: De Matteo waa halyeey waana Tababare ku haboon inuu hugaamiyo...
Juan Mata: De Matteo waa halyeey waana Tababare ku haboon inuu hugaamiyo Chelsea.
Juan Mata ayaa maanka ku haya in Roberto Di Matteo uu yahay tababarihii ku haboonaa Chelsea, ka dib markii uu ninka reer Talyaani halyeey ka noqday Stamford Bridge.
Di Matteo ayaa shaqadaan ka bedelay Andre Villas-Boas bishii March wuxuuna Chelsea ku hugaamiyey kuugaloohii FA Cup iyo isagoo markii ugu horeysay taariikhda u qaaday UEFA Champions, ka dib markii uu Bayern Munich Gool ku laadyo guusha uga qaadeen wiilashiisu.
Chelsea ayaa sidoo kale xilli ciyaareedkaan si fiican ku bilaabatay Barclays Premier League , wuxuuna Mata rumeysan yahay in Di Matteo uu kooxda ka dhisan Galbeedka London koobab badan usoo qaadi karo.
“Robbie si fiican ayuu u kala garanayaa kooxaha oo idil, Robbie sidoo kale si wanaagsan ayuu u kala yaqaanaa kooxda,” ayuu yiri Mata. “Wuxuu halkaan ka yahay Halyeey.”
Dhanka kale Mata ayaa sheegay inuu doonayo inuu Noqdo halyeey Chelsea ah sida John Terry iyo Frank Lampard.
“Ciyaartoyda da’da yar sida aniga waxay doonayaan inay noqdaan sida John iyo Frank, si ay u xusto taariikhda kooxdu.
“Kani waa sanadkeygii labaad oo aan joogo Chelsea. Run ahaantii waan u riyaaqay markeygii iigu horeysay. Waxaan noqonayaa midka ugu wanaagsan taariikhda kooxda. Laakiin weli waan sii wadanayaa.”